छैन त गज्जब ! कफि, केक र किताबको कनेक्सन  HamroKatha
छैन त गज्जब ! कफि, केक र किताबको कनेक्सन
यसमा किताब, कफि र विभिन्न खानाको स्वादको तादात्म्यता राम्रैगरी मिलाइएको छ । यो ‘कन्सेप्ट’ धेरैले मन पराए । अहिले त अन्य स्थानमा पनि यसलाई विस्तार गर्नुपर्यो भनेर ग्राहक आफैले अनुरोध गर्ने गर्छन् ।
हाम्रो कथा २०७५ भदौ १७ गते १६:१०
तपाई हामीमा पुस्तक पढ्ने बानी कति छ ? वास्तममै भन्ने हो भने विभिन्न सामाजिक सञ्जालका कारण पनि पछिल्लो समयमा पुस्तक पढ्ने संस्कृति भएका मानिसको संख्या कम छ । तर, पुस्तक पढ्ने वातावरण बनाएरै राम्रो आम्दानी गर्न र समाजका मानिसमा पुस्तक संस्कृति सिकाउन सकिन्छ भन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्यो होला ।
तर होइन । पुस्तक पढ्ने वातावरण निर्माण गर्ने व्यवसायबाट तपाईले सोचेको भन्दा बढी आम्दानी पनि गर्न सकिन्छ । यो कस्तो व्यवसाय होला भन्ने जिज्ञासा अब तपाईको मनमा उब्जियो होला । यो व्यवसाय हो, किताब, कफि अनि खानाको स्वाद एकै ठाउँमा पाइने बोधी बुक्स एण्ड बेक्सको ।
यो सुरु भएको ३ वर्ष भयो । यसका संञ्चालक हुन्, जगनाथ लामिछाने । उनी अध्ययनका क्रममा बेलायत पनि पुगे । त्यसक्रममा विभिन्न देशहरुमा बोधी बुक्सको परिकल्पनामा व्यवसाय भईरहेको उनले थाहा पाए । लामिछानेलाई यो सोच मन प¥यो । पढाई सकेर नेपाल फर्केपछि त्यस्तै परिकल्पनामा व्यवसाय सुरु गर्ने सोच बनाए ।
देश विदेशका चर्चित र पठनीय पुस्तकहरु पढ्दै कफि वा चियाको चुस्कीको मज्जा लिन चाहने ग्राहकको चाहाना पूरा गर्ने व्यवसाय उनले सुरु गरे । त्यसमाथि पनि नेपालको मौलिक सामानहरुको प्रयोगसहित । लामिछाने भन्छन्, ‘हामीसँग धेरै किताबहरु छन् । अनि नेपाली कफी छ । सकेसम्म नेपालमा पाइने सामानहरु प्रयोग गरेका छौं । नेपालीपन दिने कोशिस गरेका छौं । मान्छेले जसरी आफ्नो घरमा, पुस्तकालयमा क्रिएटिभली सोच्ने वातावरण बनाएको हुन्छ, हामीले यहाँ पनि त्यस्तै वातावरण बनाउन खोजेका छौं ।’
यो व्यवसायमा उनले किताब, कफि र विभिन्न खानाको स्वादको तादात्म्यता राम्रैगरी मिलाएका छन् । उनको यो ‘कन्सेप्ट’ धेरैले मन पराए । अहिले त अन्य स्थानमा पनि यसलाई विस्तार गर्नुपर्यो भनेर ग्राहक आफैले अनुरोध गर्ने गर्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘विभिन्न ठाउँमा खोलिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ । तर किताबसहित राख्दा खर्च धेरै लाग्छ । कुनै कफि सपमात्रै सुरु गरेको जस्तो होइन । आन्तरिक खर्च पनि बढ्छ । कफि सप सुरु गर्दा १२/१५ लाखमा सुरु गर्न सकिन्थ्यो भने यो कन्सेप्टमा सुरुमा नै त्यसको तीन गुणा बढी लगानी लाग्छ । त्यसले गर्दा भन्ने वित्तिकै सुरु गर्न गाह्रो छ । यस्ता स्थान ठाउँठाउँमा बनाउन सकियो भने बिजनेश त छँदै छ, समुदायलाई पठन संस्कृति पनि सिकाउँछ ।’
चर्चित पुस्तकहरु पढ्न पाउने त छँदैछ । सँगै यहाँ विभिन्न प्रकारका परिकार पनि पाईन्छन् । यहाँ पाईने परिकारको अर्को रमाईलो पक्ष के छ भने खानाको स्वादमा पनि मौलिकता पाईन्छ र त्यहि स्वाद ग्राहकको रोजाईमा पर्यो ।
उनी भन्छन्, ‘नेपालमा यस्ता ठाउँ छैनन् भनेपछि हामीलाई धेरैले यो काम गर्न हौसाए पनि र अर्को कुरा हामीलाई चुनौति पनि थियो । आफूलाई मन परेको टेस्टको कुरा पनि थियो । महिनामा कम्तिमा १ हजार मान्छेले मन पराइदिए भने हुन्छ भन्ने थियो । बजारतिर हामी धेरै गएनौं । यसलाई नै कसरी राम्रो बनाएर बेच्न सकिन्छ भनेर मेहनत गर्यों ।’
जगन्नाथ भन्छन्, ‘यसले एउटा रेभिन्यु जेनेरेट पनि गर्छ । त्यसबाहेक नयाँ संस्कारको पनि विकास गर्छ । कतिपय युरोपेली देशहरुमा कफि बुक, विशेषगरी नयाँ सोच र विचारलाई प्रवद्र्धन गर्ने हिसाबका ठाउँहरु छन् । नेपालमा पनि कुनै यस्ता ठाउँ भयो भने पत्रकार, कलाकार, लेखक, सामाजिक अभियन्ता, बुद्धिजिविहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याएर समाजिक, राजनीतिक मुद्दाहरुमा छलफल गर्ने र समाजलाई योगदान दिन सकिन्छ कि भनेर यो खोलिएको हो ।’
उनले सुरु गरेको व्यवसाय नयाँ थियो । व्यवसायमा उनले बजारको समस्या सुरुवातमा पनि खासै देखेका हैनन् । हुन पनि त्यस्तै भयो । व्यवसाय सुरु भएको २/३ महिनामै उनकोमा आउने ग्राहको संख्या बढ्यो । उनको नयाँ सोचाईलाई मन पराएर आउने ग्राहकको संख्या पनि धेरै छ । अहिले केहि भएन है, भन्दा पनि मासिक ५ लाख जतिको व्यापार त भएकै छ ।
उनी भन्छन्, ‘यसले जति जेनेरेट गर्ने हो, त्यो गरेको छ । यो त एउटा पाइलट प्रोजेक्टजस्तो थियो । यो नै हाम्रो अन्तिम गोल नभइकन पहिलो स्टेप थियो । यसले हामीलाई उत्साही पनि बनाएको छ, धेरै कुरा सिकाएको पनि छ । सफल हुने बाटोमा पनि छ । हामीले करिब ५ लाख बराबरको कारोबार मासिक रुपमा गरिरहेका छौं ।’
व्यवसाय भनेको के रहेछ । प्रश्न गर्न नपाउदै लामिछानेको सहज उत्तर आउछ, नयाँपन कसरी दिन सकिन्छ भन्ने पनि रहेछ । हामीसँग ठूलो सपना छ । यो सुरुवात मात्र हो । यहाँ व्यवसायका धेरै सम्भावना छन् । तर अरुले गरिसकेको काम गर्नु भन्दा पनि आफूले गर्न चाहेको व्यवसायसँग सम्वन्धित क्षेत्रको ज्ञान भएर काम गरे पक्कै सफल भईन्छ ।
बोधी बुक्स एण्ड बेक्स ४० लाखको लगानीमा सुरु भएको हो । यसका सञ्चालक लामिछाने भन्छन, ‘किताब किन्दा र पूर्वाधार तयारीका हिसाबले अलि बढि लगानी पर्यो । आइडिया मात्रै नभएर उत्पादनको पाटोमा पनि क्षमता सेट भइसकेपछि बिजनेशको सेटमा आउन चाँहि धेरै लाग्छ । एक्लै गरेपनि टिममा गरेपनि आफूले गरेको बिजनेशमा आफूलाई कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो ।’
कफि, केक र किताबमा रमाउनेहरुका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ बोधी बुक्स एण्ड बेक्स । र बोधी मेन्यूमा अन्य कुरा पनि समेटिएको छ । साहित्य, समाज, इतिहास, विकास, राजनीतिजस्ता विषयमा लेखिएका किताबहरु यहाँ उपलब्ध छन् । देश तथा विदेशमा राम्रा मानिएका नयाँ तथा पुराना किताबहरु यहाँ छन । बेष्ट सेलरको किताबहरु किन्ने व्यवस्था पनि छ । जसबाट राम्रो व्यवसाय भइरहेको छ ।
[यो सकारात्मक कथा निर्माणमा जनता बैंक नेपाल लिमिटेडले सहयोग गरेको छ । समाजका यस्तै अन्य सकारात्मक कथाहरु निमार्णका लागि जनता बैंक नेपाल लिमिटेडले जस्तै तपाई पनि आर्थिक सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ । समाजकै सहयोगमा समाजकै सकारात्मक कथा भन्ने हाम्रो प्रयत्न छ । आउनुहोस् हातेमालो गरौं ।]
तपाईसँग पनि यस्ता कथा छन् ? यदि छन् भने हामीलाई लेखेर पठाउन वा टेलिफोन नम्बर ०१४२६००८९, या इमेल [email protected] मार्फत जानकारी गराउँन सक्नुहुन्छ ।
३३ मिनेट अगाडि २ मिनेटमा पढिने
५ मिनेट अगाडि ३ मिनेटमा पढिने